Violet Evergarden (By Image Of Azure) - TOTORO ANIME PLUS
Genres : Action, Drama, Slice of Life
Stars : 8.7 🌟
Image Of Azure
Golden Anime Myanmar
The story revolves around Auto Memory Dolls (自動手記人形 Jidō Shuki Ningyō): people initially employed byascientist named Dr. Orland to assist his blind wife Mollie in writing her novels, and later rented out to other people who needed their services. In the present time, the term refers to the industry of writing for others. The story follows Violet Evergarden’s journey of reintegrating back into society after the war is over and her search for her life’s purpose now that she is no longerasoldier……
အမည်မရှိစကားတောင်မပြောဆိုတတ်တဲ့မိန်းကလေးကို ရန်သူ့တပ်ကနေစစ်သုံ့ပန်းအနေနဲ့ဖမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမေဂျာတစ်ယောက်ရဲ့လက်အောက်ကနေတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့ လေးနှစ်လောက်ကြာတဲ့စစ်ပွဲကြီးပီးဆုံးခါနီးမှာ တိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရနေတဲ့ မေဂျာက သူမကိုအသက်ဆက်ရှင်ပါ၊ ချစ်တယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို သူမနားမလည်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီစစ်ကြီးပီးနောက် သူမဟာဆေးကုသခံယူပြီး Auto Memory Doll ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုဖွဲ့နွဲ့ပြီးစာရိုက်ပေးရတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာပါတော့တယ်
Epiosde 1 (114MB)
Epiosde2(114MB)
Epiosde3(105MB)
Episode4(114MB)
Episode5(118MB)
Epiosde6(720p)
Epiosde7(117MB)
Episode 8 (118MB)
Episode9(720p)
Epiosde 10 (143MB)
Episode 11 (118MB)
Epiosde 12 (720p)
Epiosde 13 (720p)
Previous Article Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys (By Totoro Anime Plus)
Next Article Rage of Bahamut: Virgin Soul (By Image Of Azure)
Total 5700 100883
This Week 154 530
This Month 462 2902